I-Bayer inks isebenza nezinkampani ezintathu zomthetho womdlavuza we-Roundup njengoba ukuhlala kuqhubeka - i-US Right to Know
Posted on September 15, 2020 by UCarey Gillam
IBayer AG ifinyelele emigomeni yokugcina nezinkampani ezintathu zabameli ezimele izinkulungwane zabamangali abathi ukutholakala kwemithi yokubulala ukhula esuselwa eMonsanto i-glyphosate kubangele ukuthi bathuthukise i-non-Hodgkin lymphoma.
Amadili amasha enziwe nge-California Baum Hedlund Aristei & Goldman Inkampani yezomthetho; i Andrus Wagstaff iqinile evela eColorado; kanye ne- Moore Law Group waseKentucky. Amafemu ngalinye lafaka isaziso ngezibambiso neNkantolo yesiFunda sase-US yesiFunda esiseNyakatho neCalifornia ngoMsombuluko.
Amadili eza ngemuva kwezinsolo zezinkampani ezintathu zabameli zokuthi iBayer ibiphikisana nezivumelwano esezenziwe ezinyangeni ezedlule. Amafemu atshele inkantolo ngoMsombuluko ukuthi manje ngamunye wabo "banesivumelwano esisebenza ngokuphelele futhi esibophayo neMonsanto."
Ngokuphawulekile, amadili abonisa isinyathelo esibucayi ekuletheni ukuvalwa kwecala lokuhlukunyezwa kwabantu abaningi elineminyaka emihlanu manje elinamacala angaphezu kuka-100,000 alethwe ngabantu abavela e-United States abasebenzisa i-Roundup namanye ama-herbicides asuselwa e-glyphosate enziwe nguMonsanto ngaphambi kokuba waba nomdlavuza.
UBayer uthenge iMonsanto e2018 ngesikhathi kuqala ukuhlolwa komdlavuza we-Roundup. Selokhu lalahlekelwa zontathu lezi zivivinyo ezintathu ebezibanjelwe kuze kube manje futhi selilahlekelwe imizamo yokuqala yokudlulisa amacala efuna ukuguqula ukulahleka kwecala. Amajaji kwesinye nesinye sezivivinyo athola ukuthi ama-herbicides kaMonsanto enza umdlavuza nokuthi uMonsanto uchithe amashumi eminyaka efihla izingozi.
IBayer ibisabise ngokuthi izofaka izicelo zokuqothuka uma kungatholakali isixazululo ezweni lonke, ngokusho kwezokuxhumana okuvela ezinkampanini zabamangali kumakhasimende abo.
IBayer yamemezela ngoJuni ukuthi ifinyelele esivumelwaneni samaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane eziyishumi namafemu abameli baseMelika ukuxazulula iningi lezicelo zomdlavuza weRoundup ezingaphezu kuka-10. Kodwa ngaleso sikhathi yizinhlaka ezimbili kuphela ezinkampanini zabameli ezazithweswe amacala amakhulu ezazinezivumelwano zokugcina ezazisayinwe neBayer - The Miller Firm neWeitz & Luxenburg, ngokusho kwemithombo esondelene nezingxoxo. Inkampani iBaum, i-Andrus Wagstaff kanye ne-Moore babe nezivumelwano zokuvumelana kepha hhayi izivumelwano zokugcina, kusho imithombo.
Imizamo yenkampani yokuxazulula leli cala iye yabekelwa eceleni yingqinamba yokuthi zingasuswa kanjani izimangalo ezingalethwa ngokuzayo ngabantu ababa nomdlavuza ngemuva kokusebenzisa imishanguzo yokubulala ukhula yenkampani. UBayer uzame ukuthola imvume yenkantolo ngohlelo obekuzobambezela ukufakwa kwamacala amasha omdlavuza weRoundup iminyaka emine, futhi bekuzosungula "iphaneli lesayensi" elinamalungu amahlanu ukunquma ukuthi ngabe iRoundup ingadala i-non-Hodgkin lymphoma, futhi uma kunjalo , kumazinga aphansi okuvezwa. Uma ngabe iphaneli linqume ukuthi akukho ukuxhumana okuyimbangela phakathi kwe-Roundup ne-non-Hodgkin lymphoma lapho-ke amalungu ekilasi azovinjelwa ekufuneni okuzayo esikhathini esizayo.
Ijaji lesifunda sase-US uVince Chhabria wenqaba uhlelo, ukuthumela iBayer emuva ebhodini lokudweba.
UBayer wayenakho kusho ngoLwesine ukuthi ibisenza inqubekela phambili ekusetshenzisweni kohlelo “olubukeziwe” lokuxazulula amacala angaba khona we-Roundup angakusasa. Imininingwane yohlelo lwesigaba esibuyekeziwe izophothulwa emasontweni azayo, ngokusho kweBayer.
Abamangali abaningana bebengajabule ngalesi sikhalazo, bethi ngeke bathole imali eningi yize beneminyaka yokwelashwa okubizayo komdlavuza kanye nobuhlungu nokuhlupheka okuqhubekayo. Ngempela, abamangali abaningi bashonile besalinde isinqumo.
NgoSepthemba 9, abameli bakaMarie Bernice Dinner nomyeni wakhe uBruce Dinner bafaka isicelo enkantolo sokuthi uMarie oneminyaka engu-73 ubudala washona ngoJuni 2 evela ku-non-Hodgkin lymphoma yena nomyeni wakhe abasolwa ukuthi babangelwa ukuvezwa kwakhe ngababulali bokhula baseMonsanto .
Abameli bakaBruce Dinner bacele inkantolo ukuthi ibavumele ukuthi bachithe isikhalazo ngeMonsanto ukufaka isimangalo sokufa ngokungekho emthethweni. Lezi zithandani bezishade iminyaka engama-53 futhi zinezingane ezimbili nabazukulu abane.
“UMarie Bernice wayengumuntu ongajwayelekile. Ukufa kwakhe bekufanele kuvinjelwe, ”kusho ummeli uBeth Klein, omele umndeni.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker Bayer, California, umdlavuza, I-Chhabria, ukufa, Ukudla, glyphosate, ukhula, Monsanto, izibulala-zinambuzane, RoundUp, isayensi, umbulali wokhula